कसले कुरायो दुई घण्टा– कृ या अनमोल ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कसले कुरायो दुई घण्टा– कृ या अनमोल ?
फिल्मी फण्डा । बहुप्रतिक्षित फिल्म कृ को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा फिल्म निर्माण टिमले मिडियाकर्मीलाई २ घण्टा बढि कुराईएको थियो । दिउँसोको १ बजेर ३० मिनेटमा कार्यक्रम गर्ने भनिएतापनि फिल्मको टिमले कार्यक्रम ३ बजेर ३० मिनेटमा मात्र शुरु गरेको थियो । मिडियाकर्मीले आकलन लगाउँदै नायक अनमोल केसीले कुराईएको सम्झे तर वास्तविकता अर्कै रहेछ ।
अनमोल केसीले नभई त्यहा जम्मा भएका मिडियाकर्मीलाई फिल्म कृ ले कुराईएको बुझियो । मिडियाकर्मीलाई मात्र नभई सुपरस्टार अनमोललाई समेत २ घण्टा कुर्न लगाईयो । वास्तविकतामा ट्रेलर रिलिजको लागि ल्याईएको फाईल कार्यक्रम स्थलको हलमा क्रप भएर नखुलेपछि समयमै कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको रहेछ ।
मिडियाकर्मीहरुले यस विषयमा धेरै कुरा उठाएपछि निर्माता सुवास गिरीले कार्यक्रम अगावै क्षमायाचना सहित स्पष्ट जानकारी दिईएको थियो । अनमोल स्वयम २ घण्टा अघिदेखी उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई कुरिरहेका थिए । मिडियाको सामु हत्तनपत्त नआउने अनमोलले यतिका समय कृ को ट्रेलर लञ्च कार्यक्रमलाई कुर्नुपर्यो ।
पुनः ट्रेलरको नयाँ फाईल ल्याईसकेपछि ३ बजेर ३० मिनेटमा कार्यक्रम शुरु भएको थियो भने झण्डै ५ बजे कार्यक्रम सकिएको थियो । सार्वजनिक भएको ट्रेलरलाई दर्शकहरुले झण्डै ६ बजे मात्र सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाएका थिए । पहिलो पटक नेपाली फिल्मको ट्रेलर लञ्च कार्यक्रम यति लामो भएको फिल्म कृ नै हो ।
यसको कारण न त अनमोल हो, न फिल्म कृ का टिम । प्रविधीले गर्दा नै अञ्जानमा यस्तो गल्ति हुन गएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म अर्थात शनिवार दिउँसो सम्म कृ ट्रेलरलाई झण्डै ६ लाख पटक हेरिएको थियो । ट्रेलर रिलिज भएको २४ घण्टा नपुग्दै ६ लाख पटक हेरिदैँ नेपाल ट्रेन्डिंगको नंम्बर १ मा पर्न सफल भएको छ ।